Alahady, Novambra 27, 2011 Sabotsy 26 Novambra 2011 Douglas Karr
Ny Alatsinainy Cyber ​​dia nomena anarana tamin'ny 2005. Cyber ​​Monday Ireo mpiantsena dia namely ny fivarotana an-tserasera ny alatsinainy taorian'ny Thanksgiving. Tamin'ny 2010, Cyber ​​Monday dia nahazo vola amina miliara dolara, nitombo 13% tamin'ny 2009. Ny mpivarotra zoma Black dia manolotra ny sasany amin'ny tolotra tsara indrindra nataony tamin'ny taona mba hisamborana ireo mpiantsena sy ireo mpiantsena matetika mitoby mandritra ny ora maro mba hanomezana isa ny be mpitia indrindra. zavatra. Manaraka ary mikendry ny mpividy an-tserasera ny Cyber ​​Monday.
Mahagaga fa ny zoma Mainty sy ny Alatsinain'ny Cyber ​​dia tsy ny fiantsenana lehibe indrindra any Etazonia… ireo andro ireo dia natokana ho an'ny mpampangataka ny faran'ny herinandro alohan'ny Krismasy!
Infographic avy amin'ny SEO.com.
Tags: cyber mondaycyber monday infographicSary torohay
27 Nov 2011 tamin'ny 3:01 PM